भोलि श्रावण २७ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस राशिफल ! - kageshworikhabar.com
भोलि श्रावण २७ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस राशिफल !
भोलि मिति वि.सं.२०७८ साल श्रावण २७ गते । बुधबार । तपाईंको भोलिको राशिफल
तपाईंको शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो रहनुको साथै मानसिक प्रसन्नता बनि रहनेछ। काल्पनिक दुनियाँमा हराई रहनुहुन्छ। साहित्यvकलाको क्षेत्रमा आफ्नो सिर्जनात्म्कता प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। दैनिक कार्यमा अवरोध आउला। व्यवसायिक क्षेत्रमा उच्च अधिकारीसँग वाद-विवाद नहोस् यस कुराको ध्यान दिनुहोला।
तपाईंले बोली र व्यवहारमा विशेष ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। जलाशयबाट टाढा रहनुहोला। जग्गा तथा सम्पत्तिको पत्रमा सही छाप लगाउनु अघि ध्यान दिनुहोला। मध्यान्नपछि परिस्थितिमा सुधार हुनेछ। शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ रहनुहुनेछ।
तपाईंको दिन सुख-शान्तिपुर्वक बित्नेछ। मध्यान्न पछि नकरात्मक विचारलाई मनमा आउन नदिनुहोला। समयमा भोजन मिल्ने छैन। तपाईं केहि अधिक नै भावुक रहनुहुन्छ। भाईबहिनीबाट विशेष लाभ होला।
तपाईंको दिन लाभदायक रहला। परिवारको तर्फबाट विशेष लाभ होला। बोलीको सुन्दर शैलीले कार्य सरल तरिकाले सम्पन्न हुनेछ। शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहला। मध्यान्नपछि यात्रा वा पर्यटनको आयोजन गर्न सक्नुहुन्छ। मन प्रसन्न रहनाले आनन्द बढ्नेछ।
वैवाहिक जीवनमा मेलमिलाप बनिरहला। बोलीमा उग्रता कम गर्नुहोला। तपाईंको अधिक खर्च हुने योग छ। टाढा स्थित विदेशी आफन्त वा मित्रबाट विशेष लाभ प्राप्त होला। ठुला व्यक्तिबाट लाभ मिल्न सक्ने योग छ।
मनलाई भावनाको प्रवाहमा अधिक बहन नदिनुहोला। कसैसँग उग्र चर्चा र झगडामा नपर्नुहोला। पारिवारिक सदस्यसँग मतभेद नहोस् यस कुराको ध्यान दिनुहोला। आम्दानीभन्दा धेरै खर्च हुन सक्छ। पिता र ठुला व्यक्तिको सहयोग मिल्दा चिन्ताको भार कम हुनेछ।
नयाँ कामको प्रारम्भ नगर्नुहोला। तपाईको मन वैचारिक स्तरमा अट्किरहनेछ। जसकारण दृढ मनोबल कम होला। मित्रवर्गबाट विशेष लाभ होला। चिन्ताले मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। बोली र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला।
व्यवसायिक क्षेत्रमा तपाईंको कार्यको प्रशंसा हुनेछ। कार्य निकै सरलताका साथ पूरा होला। घरायसी जीवनमा मधुरता रहनेछ। मध्यान्नपछि मित्रबाट लाभ होला। दिनभरि वैचारिक स्तरमा अनिश्चितताको वातावरण रहनाले कुनै निश्चित निर्णय लिन सक्नु हुनेछैन।
व्यवसायिक क्षेत्रमा ढिलाई वा विवाद हुन सक्ला। मध्यान्नपछि कार्यालयको वातावरणमा केहि सुधार हुनेछ। पिताको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ। साथै स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। धार्मिक यात्रा वा पर्यटनको योग छ।
बिरामीमा खर्च हुनेछ। आकस्मिक धन खर्च हुन सक्छ। पारिवारिक सदस्यसँग उग्र बहस नहोस् यस कुराको ध्यान दिनुहोला। बाहिरको खानपिनलाई सकेसम्म टाल्नुहोला। निरर्थक वाद-विवाद वा चर्चाबाट टाढा रहनुहोला।
वैवाहिक जीवनमा मनदु: ख हुने प्रसंग बन्नेछ। विधार्थीको विद्याभ्यासमा प्रदर्शन राम्रो रहनेछ। दैनिक कार्यमा केही ढिलाई हुन सक्ला। व्यवसायिक स्थलमा उच्च अधिकारीसँग वाद-विवाद टाल्नुहोला। घरायसी वातावरण शान्तिमय रहला।
तपाईंको दिन मध्यम फलदायी रहनेछ। पारिवारिक सदस्यसँग मेलमिलापको प्रसंग बन्नेछ। दैनिक काममा विलम्ब हुन सक्ला। जीवनसाथीसँग मनमुटाव हुन सक्ला। जीवनसाथीको स्वास्थ्यको चिन्ता बनिरहनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा प्रसिद्दि प्राप्त होला।
राशिफलले जे जस्तो भनेपनि तपाईंको दिन शुभ रहोस्।
Previous articleमोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किदाँ एक जनाको मृत्यु, दुई जना घाइते
Next articleबागलुङमा निषेधाज्ञामा कडाइ, अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द
तपाईं गल्ती घटाउन चाहनुहुन्छ ? ध्यान गर्नुहोस्
आज कार्तिक ५ गते शुक्रबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
आज कार्तिक ०४ गते बिहिबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ?